Culimada Puntland oo weeraray dowladda,”Majiraan dowlad & ciidan wax qaban kara, shaarka dowladda Khamriga lagu keenaa”.
July 20, 2021 Xuseen 12
Puntlandtimes (Garoowe)-Culimaa’udiinka deegaamada Puntland ayaa walaaccii ugu xoogganaa ka muujiyey isticmaalka maandooriyaha Khamriga iyo Xashiishadda oo ku soo badanayey deegaamada Puntland.
Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo kamid ah culimada ugu waaweyn deegaamada Puntland oo khudbad ka jeedinayey munaasabadda Ciidda Carafo ee magaalada Garoowe ayaa sheegay in xilligaan maandooriyuhu Garoowe ka noqday shay caadi ah oo aan waxba laga qaban.
Sheekha ayaa sheegay in dhalinyaradii ay noqdeen kuwa hallaysan aynna arrintaasi sababteeda lee yihiin waalidiinta deegaamada Puntland, isagoona caddeeyey inaysan jirin dowlad arrintaasi wax ka qabanaysa taasi bedelkeedana ayba keenaan rag dowladda katirsan.
“Ma haysano dowlad waxka qaban karta maandooriyaha, ma haysato ciidamo la dagaalami kara, iskadaa inay qabtaane waxaaba soo gelinaya kuwii naga ilaalin lahaa oo isticmaalaya shaarka dowladda” ayuu yiri Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf.
Khamriga ethiopia laga keenaa weli ma maqasheen Somalida oo leh ethiopia khamrigaaga naga daa ku dar xiitaa jsland ilaa dfsomalia
Qabiil shaati dowladee huwan boob iyo dhac khamri xashiishad maalin ku taajir ku jiraan 4 sano ku taajir ku jiraan
Mahado Ali iyo ku culimada sheeganaya,
Waxaad tihiin dad aan dhuusadoodu soo gaareyn Puntland.
Faroole oo mar leh ganacsatadii mrheradohoodii waa furi waayeen markay sarkhaamiin hor fariisteen meheradohoodii Ayaan fiirsaday.
Khamro cab miiran ayaa la rabaa in soomaali laga dhigo si dalkooda looga qaado.
Qofba qofka uu ka juhli San yahay wey ugasahlantahay in uu khamri iyo daroogo isticmaalo. Jirka qofka muslimka ah uma samaysna in uu Cabo khamri ama isticmaalo daroogo. Jir ashahaadanaya ma xamili karo xaaraan waana tan kalifta in shaqsiga soomaaliga ah uu duloobo marka uu Cabo nus koob kamri ah. Gaalku waxuu cabi karaa Fuusto khamri ah oo waxaa la arki isagoo shaqeysanaya oo daaro iyo jidada dhisaya oo aan waxna ka khaldaneyn.
Maandooriyihii miyaa maantay ina haysta?!
Arrinkani ma aha wax sahlan, waa musiibo qaran. Mana aha wax ku kooban degaamada maamulka Puntland, haba lagu kala badnaada e, ee aafo ku habsatay dhammaan geyiga Soomaaliyeed.
Anigu XAL baan u hayaa sida looga hortagi karo, oo dhawr jeerna waan ka hadlay. Xalku waa in siyaasad cad laga yeeshaa isticmaalka maandooriyaha. Waa in maamul kasta, oo ay ugu horrayso federaalku, ay dhammaan ciidamada qalabka sida, shaqaalaha rayidka ah, xildhibaanada & golaha wasiirrada laga mamnuuco isticmaalka mukhaadaraadka, ee uu ugu horreeyo qaadku.
Oo sidee looga mamnuucayaa? Way fududdahay, oo shuruudaha shaqo qorista & xulashada baa lagu soo darayaa. Kuwa hadda shaqeeya ama ciidamada qalabka sida ka mid ka ah ama xilalka dawladeed haya, waxaa la odhanayaa waa in aad ku joojisaan isticmaalka mukhaadaraadka muddo 6 bilood ah; digniintaas baa la siinayaa. Deedna 6 bilood oo kasta waxaa la baarayaa KAADIDA qofka, oo qofkii laga helana shaqada waa laga cayrinayaa. Waar intaasi ma wax adag baa?
Gunaanadkii, waxaa la isku wada raacsanyahay in mukhaadaraadku uu hadda noqday wax lagu tilmaami karo musiibo qaran. Sidaa daraadeed, waa in JIHAAD lagu qaadaa aan kala go’lahayn. Si taasi u suurtashana, waa in marka hore la qeexaa micnaha maandooriyaha. Ka gadaalna siyaasaddaa aan kor ku xusay laga yeeshaa. Waa aragtida aan qabo, aniga oo ah MADAXWEYNAHA SSC. Yaa xal kale haya, oo nala wadaagaya?
Uma maleynayo in taasu suurtoobeyso waayo 75% dadka xilalka haya waxay ku shaqeeyaan maandooriye oo kooda ugu muuminsan ayaa jaad cuna. Waa adigoo tuugo shiriyey oo ka codsaday in ay ficilada ah xaditaanka xaal u keenaan. Anigu waxaan ku talin lahaa in shucibku ku qaato gacmaooda sharci fulinta oo dulmiga la dagaalamaan noocuu yahayba.
dhalinyarada raxanweeyn maashaa Allah way shaqeestaan khamri iyo xashiish ma cabaan jaad macunaan bal reer puntland caqliga ka shaqeesi haday askartu keenin yaa kale keeni laha baabuurka ka soo qaada wersheda kaamriga togwajaale askari puntland(doqon) darweelka magacisa iyo baabuurka lambarkiisa waa yaqaanaa waxaa laga soo geliya reer isaaq iyo dhulbahante ceergaabo,baran dhinaca mudug reer khalaf, bicdyahan iyo lelkase waxay ka soo geliyaan galdogob,buursaalax iyo galmudug runta halasheego dadkaas waxay rabaan doolar doolar!wixii baabi maxaa ka galay hadii shilin somali laqaadan lah dhibtu intaas waa ka yaraan laheyd hadii larabo dad inlahaligo waxa lagamara dumarka iyo dhalin yarada waxaa loofirin dumarka mefrish(dhilaysi) jadka lagu cuno halkaas ayee dayusnimado ka bilaabaan doolar waa lacg shaydaan wad ku haligmi hawa beena ayaa wax lagaaga gadan
MUKHAADARAADKA WAA IN SI WADA JIRA LOOLA WADA DAGAALAMAA.
AMXAARO, OMARO, TIGREEIYO KENYATIGA IYO EEY EEY DHALAY OO IDIL AYAA NA FAHMAY HADDII AAN NAHAY SOMALI MARYOOLEEY.
WAXBA YEEYNAAN REER REER IYO QABIIL QABIIL ISU KALA SAAR SAARIN.
HADDII AYNAAN ISKA DEYN MAALAA YACNIGA
IYO SOOMAALIDAAN ISKU WADA MASHQUULSAN IYADA CADOOWGEEDANA USOO MINDIYO LISANAYO WALEE KHATARO BADAN AYAA NAGU SOO WAAJAHAN LAAKIIN ILAAH AYAAN LEENAHAY.
Culumo ku sheegaan ujeedkooda wax kale ma ahan ee waxay rabaan in ay weeciyaan dagaalka dawladda Puntland Kula jirto argagixisada shabaab iyo daacish . Waxaan xabsi in lagu guro baa fiican .
BARRE NIN ARAGTI DHEER AYAA TAHAY MAASHAALAAH.
AL SHABAAB MEEL KASTA KU JIRAAN,
CULIMO, CAAMO, GANACSATADA, CIIDAMADA,
ARDEYDA, IYO QAYB KASTA OO MUJTAMACA.
WAA IN AAD LOO FOOJIGNAADAA.